Guushii PSG, Dareenkiisa Wareega 8-da & Zidane Oo Sharaxay Sababtii Uu Keydka U Dhigay Bale %
Guushii PSG, Dareenkiisa Wareega 8-da & Zidane Oo Sharaxay Sababtii Uu Keydka U Dhigay Bale
Tababaraha Real Madrid, ee Zidane ayaa wuxuu ka hadlay guushii ay ka gaaraan dhigooda PSG, ciyaartii xalay, taasoo ka tirsaneed wareega 16-ka dhamaadka gaara ahaan lugta labaad, markaasoo 2-1 ay kusoo badiyeen.
Kooxda macalimuu Zidane ayaa isku celceli ahaan, waxay guusha kusoo heshay 5-2, waxayna tani uga dhigan tahay inay si fiican ugu soo baxday wareega Sideed dhamaadka ee Champions League, ee qaarada Yurub.
Zidane ee kulanka kadib uwaramay wariyaasha wuxuu sheegay inuu aad ugu farax-san yahay guusha ay gaaraan, uuna Hambalyeeyno dhamaan ciyaartoydiisa iyo waliba shaqaalaha guud ee Los Blancos.
“Waan soo baxnay, waxaana usocon doonaa horey, si aan u gaarno hadafkeena, kooxda waxay ahayd sidii mar walba ay ahayd, qof walba oo aan kusoo bilaabay, si fiican ayuu udheelay, waliba si fiican ayaan utababaranay,” ayuu yiri.
“Waxaan dheelnay kulan adag, waxaan kusoo badinay garoon ay adag tahay in lagu guuleysto, waana mid muhiim ah inaan sidaan sameyno mar walba, waan ku farax-sanahay waana ku qanacsanahay,” ayuu sii daba dhigay.
Dareenkiisa wareega Xiga ee Sideed dhamaadka mar uu ka hadlayaya ayuu Zidane yiri: “Waan usoo baxnay wareega Xiga, waan ku farax-sanahay, waxaan hada isku deyi doonaa inaan wax xogaa aan ka helno horyaalka.
Ugu dambeyn, sababtii uu Gareth Bale ugu soo bilaabay ayuu ka yiri: “Waan hubaa inuu dheeli doono kulamo badan, laakiin waxaan haysanaa ciyaaro badan, waxaan joogteyn doonaa waxa aan sameyno.
“Waxaan aaminsanahay in qof walba uu yahay mid muhiim ah, sida Bale iyo kuwa kale, Haka walwalin in uusan dheelin kulankaan, maxaa yeelay waa uu dheeli doonaa,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Zidane.
BaleChampions LeaguePSG vs Real MadridZidane
Maamulka Kooxda Real Madrid oo loogu Baaqay In Ay Soo iibsadaan Neymar